February 2018 - RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper
कोरोना जितेर घर फर्किएका एक युवाले घर पुगेको २० मिनेटमै आत्महत्या गरे
चर्चित गायिका टिका प्रसाईंको ‘खुद्राखुद्री माया’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा शैलेश थापा क्षेत्री
विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको गीत ‘मायाको सागरमा’को लिरिकल भिडियो सार्वजनिक (भिडियोसहित)
दुई नेपाली युवा वल्ड बुक अफ रेकर्ड अन्तरार्ष्टिय उपाधिबाट सम्मानित
आत्महत्याको कलंकबाट सिंगो समाजलाई जोगाउनु प्रत्येक सचेत व्यक्तिको कर्तब्य:डा.डिआर उपाध्याय
अब दुईवटा मात्रै सिमकार्ड लिन पाइने
बिहीबारदेखि नदीको बहावले सतर्कता तह पार गर्ने हुँदा पूर्वतयारी अपनाउन सरकारको अपिल
फाल्गुन ३० मा ‘आर्टिष्ट नेपाल फेसन रनवे एण्ड म्युजिकल नाईट’ शो हुने, १२ मोडलहरुको रया्म्पको साथमा चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने
चिनको अर्को किर्तिमानी २ घण्टामै न्यूयोर्क पुग्न सक्ने विमानको सफल परिक्षण
February 28, 2018 rastrakhabar 0
चीनले दुई घण्टामा न्यूयोर्क पुग्ने विमानको सफल परिक्षण गरेको छ । ‘चाइना एकेडेमी अफ साइन्स’का अनुसन्धानकर्ताहरुको एक समूहले २ घण्टामै बेईजिङबाट न्यूयोर्क पुग्ने विमानको सफल परिक्षण गरेका हुन् । विशेष हवाई सुरुङ ९विन्ड टनेल० मा गरिएको परिक्षणमा विमानले ५६ सय माइल प्रति घण्टाको गति लिएको थियो ।
यसबारे खोजपत्र चिनियाँ जर्नल ‘फिजिक्स, मेकानिक्स एण्ड एस्ट्रोनमी’मा प्रकाशित भएको छ । सो परियोजनाको नेतृत्व चुई काईले गरेका थिए । उनी ‘चाइना एकेडेमी अफ साइन्स’ को उच्च तापक्रम ग्यास डाइनेमिक्सको प्रमुख प्रयोगशालाका एक सदस्य हुन् । यो विमान निर्माणमा चीनका अन्य हापरसोनिक कार्यक्रमहरुको खोजको पनि योगदान रहेको छ ।
यो सफलता चीनले अन्य हाइपरसोनिक प्रविधिका अन्य क्षेत्रहरुमा सफलता प्राप्त गरेको खबर आएसँगै आएको हो । जसमा चीनको डी।एफ।–१७ एचजीभी लगायत अन्य रकेटजडित अन्तरिक्षयानहरु पनि समावेश रहेका छन् ।
‘साउथ चाइना मनिङ्ग पोष्ट’मा आफ्नो नाम बताउन नमिल्ने ९सुरक्षा संवेदनशिलताका कारण० एक सैन्य वैज्ञानिकले भने चुईको टिमलाई उनको ‘विलक्षण डिजाइन’ को सफलताको लागि बधाई दिँदै यो खालको प्रविधी भविष्यमा ‘भिमकाय हापरसोनिक बम वर्षक विमान’ मा प्रयोग हुन सक्ने बताए ।
तीव्र गतिको क्षेत्रमा चीनको अर्को सफलता सोही प्रयोगशालामा विकास हुदैँछ । त्यहाँ सन् २०२० मा सञ्चालनमा आउने गरि विश्वको ठूलो हवाई सुरुङ्ग निर्माण भइरहेको छ ।
दुई महिलाको हत्या गरेको आरोपमा सन्त पक्राउ
कञ्चनपुरको पुनर्वास भीम वस्तीका ६४ वर्षीय वृद्धा मानमती धामीको हत्यामा संलग्न ६६ वर्षीय रामलाल राना (सन्त) पक्राउ परेका छन् । गत बिहीबार अभियुक्त रानाले भीम वस्तीकी वृद्धा मानमती धामीलाई जंगलमा बाख्रा चराइरहँदा घरेलु हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
वृद्धाको शव शंकास्पद अवस्थामा लालझाडी राष्ट्रिय वनमा भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट प्रहरी निरीक्षक हिरेन्द्रबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो । झण्डै एकसाता लामो अनुसन्धानपछि प्रहरी निरीक्षक रोकाया नेतृत्वको टोलीले स्थानीय डोकेबजार नजिक कुटिया (धर्मशाला) मा आश्रय लिँदै आएका अभियुक्त रानाको यस अपराधामा हात रहेको पत्ता लगाएको हो ।
“अनुसन्धान गर्दै जाँदा सुरुमा अभियुक्तले निकै बहानाबाजी गरे,” प्रहरी निरीक्षक रोकायाले भन्नुभयो, “अनुसन्धान थालेको दुई दिनपछि हत्या गरेको स्वीकार गरे ।”
प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्त रानाले मादक पदार्थ सेवन गरेर जंगलको बाटो हुँदै कुटियातर्फ फर्किदै गर्दा बाटोमा वृद्धा धामीको हँसिया प्रहार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
प्रहरीले अभियुक्त रानालाई थप अनुसन्धानका लागि आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर पुयाएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियुक्त रानालाई कारबाही अगाडि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ ।
अभियुक्त रानाले गत साउन २९ गते पुनर्वास–११ भीमवस्तीस्थित सिद्धदेवी मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशालामा बस्दै आएका धर्मा मल्ल (माता) लाई पनि हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । मल्ललाई हत्या गरेको झण्डै सात महिनापछि उक्त घटनाको पनि रहस्य खुलेको हो ।
धर्मशालामा आश्रय लिँदै आएका मल्ललाई आफूलाई धर्मशालामा पस्न नदिएको झोंकमा हत्या गरेको समेत प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको रिचाह घर भएका अभियुक्त राना डोकेबजारको कुटियामा बस्दै आएका थिए । रासस
रोकिएन सिरियामा बमवारी,राष्ट्रसंघले गर्यो युद्धबिरामको लागि पूनः आग्रह
सिरियाको राजधानी दमासकसको नजिकै रहेको यस गुटा नगरमा जारी आक्रमण अत्यन्तै क्रुर रहेको र यसबाट सयौँ सर्वसाधारण र बालिबालिका पनि परेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले तत्कालै युद्धविरामको लागि पुनःआग्रह गरेको छ ।
उक्त क्षेत्रमा चार लाख सर्वसाधारण हिंसात्मक युद्धको चपेटामा परेका छन् । उनीहरुको उद्धारका लागि कुनै पहल सुरु भएको छैन । उनीलाई आवश्यक मानवीय सहायता पुर्याउन पनि सकिएको छैन ।
दमासकस र मस्कोको संयुक्त सहभागीतामा गुटा सहरमा भएको हिंसात्मक हवाई कारबाहीलाई स्थगित गरी कम्तीमा ३० दिनका लागि युद्धविराम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव गरेको थियो ।
सुरक्षा परिषदमा भएको छलफलपछि तत्काल युद्धविराम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुथ्रेसले केही दिनमात्र अघि आग्रह गरेका थिए ।
महासचिव गुथे्रसले युद्धले यहाँका नागरिकलाई आक्रान्त बनाएकोले योे अवस्थाको अन्त्यगरी सिरियाको पूर्वी गुटा क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम गर्न माग गरेका थिए ।
तर राष्ट्रसंघको यो प्रस्ताव बमोजिम यहाँ युद्धविरामको लागि तयारी भने भएको छैन । बरु मङ्गलबारदेखि यहाँका विद्रोहीहरुमाथिको हमला दिनमा ५ घन्टाका लागि मात्र रोकिएको सिरियाली सेनाको भनाई आएको छ ।
विद्रोही नियन्त्रित उक्त क्षेत्रमा रुसी सहयोगका सरकारी फौजले आक्रमण जारी राख्दा महासचिव गुथे्रसको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले गत शनिबार सिरियाभर ३० दिने युद्धविराम गर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो ।
सिरियाको पूर्वी भागमा पर्ने गुटा नगरमा गत एक हप्ताभन्दा लामो समयदेखि जारी रहेको भीषण हमलामा क्लोरिन ग्याससमेत प्रयोग गरेको एउटा चिकित्सक समूहले जानकारी दिएको छ ।
यस विषयमा सिरियाको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । हाल सिरियामा जारी हवाई हमलाको भने विश्वव्यापी निन्दा भएको छ ।
श्री ५ भण्डारी सरकारको नामबाट फेसवुक चलाउने युवक पक्राउ
श्री ५ भण्डारी सरकारको नामबाट फेसवुक चलाउने एक युवक तुलसीपुरमा पक्राउ परेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ निवासी १९ बर्षका आकाश भण्डारीलाई तुलसीपुर बजारबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक संजाल फेसवुकमार्फत विनाप्रशंग शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी गलत कुरा सम्प्रेषण गरेकाले पक्राउ गरिएको भन्दै उनीविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रनाउ सापकोटाले आफ्नाविरुद्ध पनि चरित्र हत्या हुने गरी गलत स्टाटस लेखेको बताए ।
‘साइबर क्राइम मुद्दा चलाउने मान्छे हो, प्रनाउ सापकोटाले भने,‘ तर भविष्य किन विगारौं भनेर सार्वजनिक मुद्दा चलाउन लागेको छु ।’ तुलसीपुरमा सार्वजनिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गलत कुरा प्रवाह गरेको भन्दै पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो ।
यसअघि फेक आइडीमार्फत एक महिलाको फोटो पोष्ट गर्ने एक युवक पनि पक्राउ परेका थिए । भण्डारीले विगतदेखिनै फेसबुकमार्फत् विवादस्पद कुरा लेख्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
भुईमा सुत्नुको फाईदा थाहपाउनु भयो भने, छोड्नु हुनेछ बेडमा सुत्न
पहिला हाम्रा पूर्खाहरू भुइँमा नै सुत्थे । तर हामी आधुनिक भनाउँदाहरू झुटो प्रतिष्ठाका लागि महंगा फर्निचर किन्छौं । नभरिको मेहनतपछि नरम ओछ्यानमा डङ्रङ्ङ पछारिँदा आराम त हुन्छ तर नरम गद्दामा सुत्दा स्वास्थ्यलाई हानि पनि पुग्छ है । गद्दासहितको खाटमा सुत्दा कम्मर र गर्दनका पीडा हुन्छन् । तर भुइँमा सुत्न थाल्नुभयो भने यी कुनै पनि समस्याले सताउँदैनन् ।
कम्मर दुख्ने समस्या अहिले आम समस्या भएको छ र जुनसुकै उमेरका मानिसलाई यसले सताउँछ । तपाईंमा पनि यो समस्या छ भने भुइँमा सुत्न थाल्नुस् । काँध र गर्दनमा पीडा हुने समस्या आजकलका मानिसलाई खुबै हुन्छ । लगातार कम्प्युटरमा काम गर्ने, झुकेर हिँड्ने, सही पोजिसनमा नबस्ने र गलत तरिकाले सुत्ने गर्दा यस्ता समस्या आउँछन् । काँधलाई सिधा पार्न र गर्दन दुखेको निको पार्न पनि भुइँमा सुत्न थाल्नुस् ।
शरीरमा सही रक्तसञ्चार होस् भनी चाहनुहुन्छ भने भुइँमा सुत्न थाल्नुस् । यसो गर्दा शरीर दिमागको तालमेल सही बस्छ र स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ ।
दिनभरिको थकान र तनावलाई हटाउने गजबको उपाय भुइँमा सुत्नु नै हो । भुइँमा सुत्दा मानसिक शान्ति पाइन्छ, मन रमाउँछ र तनाव तथा थकान भाग्छ ।
बेस्सरी थाकेर पनि निद्रा लागेन भने तपाईं भुइँमा सुत्न थाल्नुस् । यसो गर्दा तपाईंलाई गजबको निद्रा लाग्छ र उठेपछि पनि थकान र टाउको दुख्नेको साटो ताजापन अनुभव हुन्छ । शरीरको क्षमताअनुसार भुइँमा सुत्न थाल्नुस् त । तपाईं कति आनन्दित महसूस गर्नुहुनेछ ।
नेपाल टेलिकमको होली अफर
February 28, 2018 February 28, 2018 rastrakhabar 0
नेपाल टेलिकमले फागु पूर्णिमाका अवसरमा “होली अफर” ल्याएको छ। होली अफरमा अनलिमिटेड भ्वाइस नाइट कल, अनलिमिटेड अल टाइम डाटा, अनलिमिटेड नाइट डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस डाटा र एसएमएस लगायतका पाँच किसिमका सेवामा आकर्षक अफर दिन लागिएको टेलिकमले प्रेस बिज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ।
अनलिमिटेड भ्वाइस नाइट कल अन्तर्गत ग्राहकले ३५ रुपैयाँमा राती दश बजेदेखि बिहान छ बजेसम्म तीन दिनसम्म कल गर्न सक्नेछन्। अनलिमिटेड अल टाइम डाटा अन्तर्गत ग्राहकले ५० रुपैयाँमा चौबीस घण्टा अलटाइम डाटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
कम्पनीका अनुसार ग्राहकले एक जिबीको डाटा थ्रिजी र फोर जीको गतिमा चलाउन सक्नेछन् भने समयावधि पछि २ सय ५६ केबीपिएसको गतिमा चलाउन सक्नेछन्।
ग्राहकले एक जिबीको थ्रिजी र फोरजीको गतिमा चल्ने अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक १५ रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन्। यो सेवा राती १० बजे देखि विहान छ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीको अनुसार समयावधी पछि उक्त डाटा २ सय ५६ केबीपिएसमा चलाउन सक्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
ग्राहकले अनलिमिटेड भ्वाइस, डाटा र एसएमएस अफर एक घण्टाको लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन्। २५ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने अफर टेलिकमको नेटवर्कमा रहेर ग्राहकले भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सेवा लिन सक्ने कम्पनीले बताएको छ।
जिएसएम मोबाइलकर्ताले होली अफर फागुन १७ गतेदेखि चैत १ गतेसम्म प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ। ुहोली अफरु खरिदका लागि ग्राहकले ८१४१५ ३ मा डायल गर्नुपर्ने पनि टेलिकमले जनाएको छ।
पूर्व उपराष्ट्रपति झाले भारतीय मिडियालाई “नेपाल मगन्ते देश हो ” किन भने ?
पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भारतीय पत्रिका दैनिक जागरणसँगको कुराकानीमा नेपाल मगन्ते देश भएको बताएका छन् । झाको भनाइ उद्धृत् गर्दै सो पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ( “जुन देशले जति सहयोग गर्छ त्यसलाई स्वीकार गर्न नेपाल कहिल्यै हिच्किचाउँदैन, किनकि नेपाल एक मागन्ते देश हो । जसले जति सहयोग गर्छ, ऊप्रति उत्तिकै आकर्षण हुनु स्वभाविक हो ।”
“भारत को चीन से डरने की जरूरत नही” शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा उनले भारत चीनसँग डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन् ।
“भारत डराउनु पर्ने अवस्था नै छैन, किनकि नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि मात्र चीनले भारतमाथि केही गर्न सक्छ, जुन बिलकुल सम्भव छैन ।” भारतीय दूतावासले अहिले नेपालमा राजनीति गरिरहेको भन्दै उनले त्यसलाई बन्द गर्न सुझावसमेत दिएका छन् ।
Link : JAGARAN.COM
लाईसेन्स ट्रायलका लागि मापदण्ड बिपरित संचालित सूजुकी ड्राईभिङ्ग
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट दैनिक ७ सयदेखि ८ सय जनाले मोटरसाइकलको ट्रायल दिन्छन् । एकान्तकुनाबाट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने सबै जनाले सुजुकी ड्राइभिङमै ट्रायल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर ट्रायल दिन पुगेकामध्ये ३० प्रतिशत मात्रै पास हुन्छन् । फेल भएका बाँकी ७० प्रतिशतले पुनः ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ ।
गत वर्ष ९२०७३० फागुनदेखि सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको ट्रायल गराउने ठेक्का पाएको थियो । मापदण्ड नै परिमार्जन गरेर सुजुकीलाई १० वर्षसम्मका लागि ट्रायल गराउने ठेक्का दिइएको थियो । जसको अन्य व्यवसायी र उपभोक्तावादीहरुले चर्को विरोध पनि गरेका थिए । उक्त ठेक्का सम्झौतामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको विषय पनि प्रकाशमा आएका थिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना देशकै सबैभन्दा बढी लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय हो । यो कार्यालयमार्फत साना–ठूला सवारीसाधनको चालक अनुमपति पत्रका लागि १ हजार ५ सय देखि २ हजार जनाले दैनिक ट्रायल दिन्छन् । यी सबै ट्रायल सुजुकी ड्राइभिङमै हुन्छन् ।
सुजुकीले ट्रायल गराएबापत मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि २००, कारको लाइसेन्सका लागि ३२०, टेम्पोको लाइसेन्सका लागि ३९०, ट्र्याक्टरको लाइसेन्सका लागि ४०० र मिनीबसको लाइसेन्सका लागि ५०० रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) सेवाग्रहीबाट उठाउँदै आएको छ । ट्रायल गराएवापत सुजुकी ड्राइभिङले १ दिनको ५ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछ ।
पहिलो ट्रायलबाट एक दिनमै लाखौं रुपैयाँ कमाउने सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरले प्रशिक्षार्थी फेल गराएर थप असुली गर्छ । सुजुकी ड्राइभिङ सेन्टरबाट दैनिक ७० प्रतिशत पशिक्षार्थी लाइसेन्समा फेल हुँदा उसले दैनिक ७० प्रतिशत थप कमाइ गर्न पाउँछ ।
विवरण अनुसार सुजुकीको ड्राइभिङ सेन्टर नै सरकारी मापदण्ड विपरीत छ । यातायात व्यवस्था विभागले गत माघ २५ गते ९बिहीवार० यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनालाई पत्र लेखेर सुजुकीले मापदण्ड मिचेर ड्राइभिङको ट्रायल गराइरहेको भन्दै सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयले पत्रबारे कुनै चासो नै दिएको छैन ।
विभागले गरेको अध्ययनका अनुसार सुजुकी ड्राइभिङ स्कूलले अंग्रेजी अक्षर आठ ९एट० टेस्टको प्याराफिटको दूरी मिलेको छैन । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि एट टेस्ट प्याराफिटको दूरी बीचको दुई गोलो घेरा ८–८ मिटरको हुनुपर्छ । साथै बीचको गोलो घेराको बाहिरको भाग ९गाडी घुमाउनुपर्ने ठाउँको ग्याप ४ मिटरको हुनुपर्छ । तर सुजुकीले उक्त ग्याप ३ मिटरको मात्रै राखेको विभागले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीको ट्रायल गर्ने एट टेस्ट प्याराफिटको बीचको दुई गोलो घेरा ३–३ मिटरको हुनुपर्छ । बाहिर सवारी गुडाउने ग्याप १।५ मिटरको हुनुपर्छ । तर सुजुकीले दुई पाङ्ग्रे सवारीको आठको ग्याप १.५ मिटरभन्दा कम राखेको भेटिएको छ ।
सुजुकी ड्राइभिङले मोटरसाइकल र स्कुटर घुमाउने जमिनको सतहभन्दा माथि उठाएको छ । जसका कारण पनि धेरै प्रशिक्षार्थी अलमलिएर फेला हुने गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले गत असोजमै गरेको अध्ययनअनुसार उक्त ट्रायल सेन्टर भत्काएर पुन बनाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । तर एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय र सुजुकी ड्राइभिङले विभागको निर्देशनप्रति कुनै चासो दिएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले पटक(पटक पत्र काटेर सुजुकी ड्राइभिङको प्राविधिक त्रुटी सच्याउन निर्देश दिइसके पनि एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखले त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
SOURCE : LOKANTAR
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको कार्यक्रममा कलाकार मनोज आचार्य भए सम्मानित
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, वाशिङटन डिसीको आयोजनामा अमेरिकाको भर्जिनिया मनासस शहरमा आयोजित एक बिशेष साहित्यिक कार्यक्रममा कवि, कलाकारहरुले आ आफ्ना कविता, गजल, मुक्तक, हाँस्यब्यङ्ग, गीत, नाच प्रस्तुत गरेर वाशिङटन डिसीको साहित्यिक र साँगीतिक माहोललाई नयाँ आयाम दिएका छन ।
प्रा. डा. हरिराज भट्टराई , मनोज आचार्य , नीरा शर्मा, दुर्गा रिजाल, रामप्रसाद खनाल, प्रकाश नेपाल, नारायण घर्ति मगर, परशु तिमल्सेना, पुस्कर पन्त, अम्बिका गुरुङ, मन थापा, सुनिता खत्री, बिमला निरौला, कमला खरेल, राम शरण हुमागाइँ, गुणराज लुइँटेल, अरुण रुपाखेती, अम्बिका गुरुङ, सुजना
ढकाल, शकुन्तला न्यौपाने, गोमा न्यौपाने, तारा न्यौपाने, पुस्पा घिमिरे, सिता लुइँटेल, खगेस्वर न्यौपाने, मोहन निरौला, बिना घर्ति मगर, सुस्मा खनाल लगायतका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुको उपस्थितमा कविता, गजल, मुक्तक, हाँस्यब्यङ्ग कार्यक्रमले अमेरिकामा पनि नेपाल र नेपालीको झल्को दिईरहेको थियो । ४ घण्टा चलेको उक्त कार्यक्रममा कवी तथा कलाकार पुस्कर पन्तको कविता सङ्रह नेपाल देखी अमेरिका सम्मको बिमोचन गरिएको थियो भने आयोजकहरुले अमेरिकाबासी नेपालीका तर्फ कलाकार मनोज आचार्यलाई वहाँले कला र साहित्यका क्षेत्रमा पुर्‍याउनुभएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो ।
यसै गरी अमेरिका नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष प्रभा भट्टराई देउजालाई पनि सम्मान गरिएको कार्यक्रममा कानुन एबम भाषा बिद डा। होमा बहादुर थापाले भाषा, साहित्य र सँस्कृतिका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । महासचिब भुप नारायण घर्ति मगरले सँचालन गर्नुभएको उक्त वाशिङटन डिसी साहित्य सँगममा संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद खनालले उपस्थित सबैलाई बिशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जापानी नागरिक मिचिगोले जापानिज भाषाको गीत गाउनु भएको थियो । । उक्त अबसरमा अनेसास डिसीका कोसाध्यक्ष, हाँस्य कवी तथा कलाकार पुश्कर पन्तको नयाँ कृति नेपाल देखी अमेरिका सम्मको बिमोचन पनि गरिएको थियो ।
Copyright © 2020 RastraKhabar-Nepal's Popular Digital Newspaper. All rights reserved.